लक्ष्मीपूजाको रात काठमाडौंदेखि न्यूयोर्कसम्म कस्तो देखिए ? (तस्वीरमा) - Vishwanews.com
लक्ष्मीपूजाको रात काठमाडौंदेखि न्यूयोर्कसम्म कस्तो देखिए ? (तस्वीरमा)
काठमाडौं । बिहीबार संसारभर लक्ष्मीपूजाका साथ दिपावली मनाइयो । उज्यालोको अनेक रुपले नेपालको राजधानी शहर काठमाडौं धपक्कै बल्यो । भारतमा समेत दिपावली धुमधामसाथ मनाइयो । यी दुई मुलुकबाहेक संसारभर दिपावलीका अनेक स्वरुप देखिएका छन् ।
यमपञ्चक अर्थात् तिहारको तेस्रो दिन विहीबार हिन्दु धर्मावलम्बीले ऐश्वर्य, धन धान्य र सम्पन्नताकी देवी लक्ष्मीको पूजा आराधना गरी श्रद्धा भक्तिपूर्वक लक्ष्मीपूजा पर्व मनाएका हुन् । आज चौथो दिन भने गोवद्र्धन पूजा मनाइदैंछ । गाई, गोरु तथा गोठमा पूजा गरि यो पर्व मनाइन्छ । यो वर्ष भाइटिका शनिबार परेको छ । भाइटिकाको उत्तम साइत भने ११ बजेर २ मिनेट जाँदा रहेको छ ।
दिपावलीमा चम्किएको काठमाडौ Photo : Gorakhapatra
अमेरिकाको न्यूयोर्कस्थित वर्ड ट्रेड सेन्टरमा दिपावलीको झलक ANI\_BBC
बेलायतको लेस्टर शहरमा दिपावली : BBC
दुबईमा लक्ष्मीपूजाको रात